एशले एलिजाबेथ ज़ेन्डर
एशले Zehnder। मग शॉट
एक पास्ताडेना, टेक्सास हाई स्कूलका पूर्व शिक्षकले 17 वर्षीया विद्यार्थीसँग यौन सम्बन्ध राखे।
हरिस काउन्टी अभियुक्तका अनुसार, 24 वर्षको एशले एलिजाबेथ जहनेर, जीवनी शिक्षक र सहायक चेयर कोचले टेक्सासका पास्ताडेना हाई स्कूलमा 17 वर्षीया विद्यार्थीसँग यौन सम्बन्ध सुरु गरे।
1 अक्टोबर, 2014 मा, जाहेडर सहायक प्रिन्सिपलमा गएका विद्यार्थीहरूको बारेमा उनीहरूको नग्न तस्विर सम्भवतः उनको चिन्ता सुनाईरहेको थियो कि एक पुरानो सेल फोनमा।
जब सहायक प्रिन्सिपल विद्यार्थीले प्रश्न गरे, 17 वर्षीया केटाले जेनडरको नग्न तस्विरमा भर्ना गरे कि उनी उनको पाठ पढे र उनीहरूले हस्टनमा आफ्नो अपार्टमेन्टमा मईदेखि यौन सम्बन्ध राखेका थिए।
अभियुक्तहरूको अनुसार, विद्यार्थीले ज़ेनरको फर्नीचर र उनको घरको सजावट वर्णन गर्न सकेको थियो।
जेनडरले केटाकेटीलाई पठाउनुभन्दा यौन स्पष्ट सन्देशहरू देखाइएपछि विद्यार्थीसँग यौन सम्बन्ध राखे। उनले आफ्नो पदबाट पनि इस्तीफा दिए।
उनी बच्चाको साथ अनुचित सम्बन्ध भएको आरोप लगाएको थियो, दोस्रो-डिग्री एल्टिनी।
अनियमित व्यवहारका लागि पक्राउ गरिएका महिलाहरूलाई हेरेपछि बालबालिका ग्यालरीका साथ अघिल्लो वर्षका गिरफ्तारीहरूको समीक्षा गर्न।
मेगन महनी। फेसबुक
24 वर्षीया मेगन महनी, शारीरिक शिक्षा शिक्षक र सहायक एथलेटिक निर्देशकको रूपमा काम गर्दै थिए, सन् 1 994मा उनीहरूले इक्यान्सेन्स आइल्याण्डको आर्टिन आइल्याण्डको प्रतिष्ठित म्यर क्याथोलिक हाई स्कूलमा उनीहरूको अभिनय गरेकी थिइन्। -ल्ड विद्यार्थी।
न्यू यर्क पोस्टको अनुसार, अदालतका दस्तावेजहरूले राज्यलाई माझीसँग यौन सम्बन्ध राखेका थिए, जसमा स्कूलको आधारमा, अक्टोबर 31, 2013 र9जनवरी 2014 को बीच धेरै पटक छन्। यौन सम्पर्क कथित रूपमा महनीले विद्यार्थीलाई सम्पर्क गरिसकेपछि सुरु भयो र उनको बास्केटबलमा कोच
अक्टोबरमा, महनीले 30 र वैधानिक बलात्कारको आरोप लगाए र आपराधिक यौन क्रियाकलापका चार गन्ती लगाएको आरोप लगाएकी थिइन् कि उनी र विद्यार्थीले संलग्न गरेको मौखिक सेक्सको कारण "कम से कम दुई पटक प्रति महिनाको अवधिमा।"
प्रत्येक चार्ज एक असन्तुष्ट हो र अधिकतम चार-वर्षको सजा पर्दछ।
वाग्नीन कलेजका पूर्व बास्केटबल स्टार महनी, जमानत बिना रिलीज गरियो र उनको र उनको वकीलले आरोपमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।
थप पतन बाहिर
रिचर्ड Postiglione एथलेटिक निर्देशक र मक क्याथोलिक हाई स्कूल मा अक्टोबर देखि मोर क्याथोलिक हाई स्कूल मा एक उच्च प्रशासक थिए जब स्कूल को अधिकारीहरूले उनलाई स्कूल को खेल कार्यक्रमहरु लाई हटा दिए किनकि उनले कथित तौर मा Mahoney को बारे मा जान्दछन् र एक महिला महिला कोच संग यौन संपर्क, तर पुलिस संग विफल वा बाल-सुरक्षा सेवाहरू।
बच्चाहरु ग्यालरीको साथ अतीत व्यवहारका लागि पक्राउ गरिएका महिलाहरूलाई भेट्न अघिल्लो वर्षका गिरफ्तारीहरू हेर्न।
Michelle Strickland। मग शॉट
23 वर्षीय बैंड विद्यार्थीसँग यौन सम्बन्धमा आरोप लगाउन पछि ह्यूस्टन स्ट्रिफर्डफोर्ड हाई स्कूलमा सहायक ब्यान्ड निर्देशकको रूपमा 23 मिशेल मिशेल स्टिकल्याण्डले आफ्नो स्थितिबाट निकालिएका थिए।
अदालतको दस्तावेजको अनुसार, विद्यार्थीले उनी र स्टिकल्याण्डले स्ट्रिफफोर्ड ब्यान्ड हलमा भण्डारण कोठामा यौन सम्बन्ध राखेको थियो र फेरि घरमै वसन्त ब्रेकमा मे 2014 मा सेक्स गरे।
स्कूल प्रिन्सिपल स्टिक्रल्यान्ड र विद्यार्थी बीच टेक्स्ट सन्देशहरू समीक्षा गरिसकेको छ कि पुलिसले सुझाव दिएको छ कि दुबैबीचको यौन सम्बन्ध निरन्तर थियो।
Strickland को गिरफ्तारी को तहत राखयो र एक छात्र संग अनुचित सम्बन्ध संग चार्ज गरिएको थियो।
Rebecca Diebolt। मग शॉट
प्लासेन्टिया हाई स्कूल शिक्षक रिबेका एलीन डर्लबल्ट, 35 बर्षको उमेरमा हुनुहुन्थ्यो जो पूर्व विद्यार्थीको यौन सम्बन्ध सम्बन्धी आरोप लगाएपछि पक्राउ गरिएको थियो।
प्रहरीको अनुसार, एक महिलाले अधिकारीलाई सम्पर्क गरे र यौन सम्बन्ध सम्बन्धी डबबल्टसँग 2004 सालदेखि चार वर्षसम्म चलेको थियो। यौन सम्पर्क गर्दा कथित रूपमा सुरु भयो डेबल्ट महिला महिला शिक्षक र तैराक कोच थियो।
महिलाले अधिकारीहरूलाई बताए कि उनी डेलबल्टको कक्षामा सेक्स गरेका थिए र उनको घर र यो विद्यालयको घडी पछि र सप्ताहांतको समयमा भयो।
अन्वेषकहरूले महिलाले स्नातक गरिसके पछि सम्बन्ध जारी राखे र कलेजमा भाग लिइन्।
डिबल्ट को 11 जून, 2014 मा एक व्यक्ति संग यौन सम्पर्क को संदेह मा गिरफ्तार गरिएको थियो र 18 वर्ष भन्दा कम उमेर को एक व्यक्ति संग यौन प्रवेश को लागि।
एक $ 100,000 बंधन सेट गरिएको थियो।
डिलबल्ट 2003 बाट क्यालिफोर्नियाको वलिसिनिया हाई स्कूलमा क्यालिफोर्निया पढाइरहेको छ।
जय मर्सी। फेसबुक
जय मर्सी,39, 2014 सम्म3जून 2014 सम्म क्वीन्सको ग्रोवर क्लीवल्यान्ड हाई स्कूलमा एक हाई स्कूल जिम अध्यापक थिए, जब उनी कथित रूपमा 16 वर्षीया विद्यार्थीसँग यौन सम्बन्ध राखेका थिए।
आपराधिक उजुरीको अनुसार, यौन सम्पर्क जून 2013 मा सुरु भयो, जब उनले आफूलाई एक अलमारी मा विद्यार्थीलाई उजागर गरे। यो राज्यमा र परिसरमा दुवै मासिक रूपमा जून र जुलाई मा कम्तिमा 30 पटक विद्यार्थीसँग यौन सम्बन्ध थियो भनेर राज्यमा जान्छ।
उनी किशोरलाई यौन सम्बन्धी स्पष्ट पाठहरू पठाउने गर्दछन्। पीडितलाई पनि एक यौन स्पष्ट भिडियो को लागी भनिन्छ जुन अधिकारीहरु द्वारा जांच गरिएको छ।
स्कूलका अधिकारीहरूले यौन सम्पर्कलाई पीडाको एक साथीको आमाबाबुलाई सचेत गराए। एकपटक आरोप लगाइएपछि स्कूलका पदाधिकारीहरूले उनको पदबाट मर्सी हटाउँथे र अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गरे।
मर्सी विवाहित छन् र उनको पतिले विद्यालयमा विज्ञान शिक्षकको रूपमा काम गर्दछ। उनी 1999 मा ग्रोवर क्लीवल्यान्ड हाई स्कूलमा जिम शिक्षक थिए।
पुलिस भन्छन् कि मर्सी तेस्रो-डिग्री बलात्कार र तेस्रो-डिग्री आपराधिक यौन क्रियाकलापको आरोप लगाएको छ।
पामेला लियोन जोन्स
पामेला जोन्स। मग शॉट
35 वर्षपछि पामेला लियोन जोन्सले उनको पतिले आफ्ना विद्यार्थीहरूसित यौन सम्बन्ध राखेकी छिन्, पहिले डेसेटो, टेक्सासमा एथलीट्स अफ परिवर्तनको सुविधाबाट अंग्रेजी शिक्षकको रूपमा आफ्नो शिक्षण स्थितिबाट इस्तीफा दिए।
यूएस मार्शलहरूले4जून 2014 मा जोन्सलाई तीन 16 वर्षीय पुरुष विद्यार्थीसँग यौन सम्बन्ध राखेपछि जोन्स पक्राउ गरे। प्रहरी प्रतिवेदनको अनुसार, घटनाहरू अप्रिल र अप्रिल 2014 मा भएको थियो।
प्रहरीलाई दिईएको जारी बयानमा, एक विद्यार्थीले भने कि उनी र जोन्स उसलाई आफ्नो चाचीको घरमै उठाउँदा उनको कारमा सेक्स गरेको थियो।
दोस्रो शताब्दीले उनी र जोन्सको घरमा 31 बर्षको यौन सम्बन्ध राखे। उनले भने कि उनी र एक 19वर्षीय साथी जोन्सको घरमा निमन्त्रणा गरेका थिए र उनीहरूले जोन्सका छोराछोरीले यौन सम्बन्ध राखेका थिए।
तेस्रो विद्यार्थीले भन्यो कि उहाँ र जोन्स एक रेस्टुरेन्ट मा भेट पछि होटल कोठा मा गए।
परिवर्तनको लागि एथेटहरू
एथलीट अफ परिवर्तनको सुविधा 13-17 बर्षका उमेरका बीचका केटाकेटीहरू हुन्, र जो अदालतले त्यहाँ आदेश दिएका छन् भने भावनात्मक, व्यवहार वा अन्य समस्याहरूको कारण।
विद्यालयको संस्थापक र अध्यक्ष डान्स डेभर्नन अनुसार, केही विद्यार्थीहरू स्कूल पठाउन अघि हर्षित भए।
डेभिaughn ले भन्यो कि यो जोन्स को पति हो जो उनको बच्चाहरु को उनको घर को बेडरूम मा थियो पछि उनलाई आरोपित यौन गतिविधि को बारे मा भन्यो।
जोन्सलाई बच्चाको यौन आक्रमणको तीन गन्ती लगाईयो। त्यो अहिले बांडमा छ।
उनले उनीहरूलाई खुवाए। र तिनीहरू पीडित छन्। तिनीहरू उनको शिकारलाई शिकार गर्दैछन् र उनीहरूलाई के चाहन्छन्, "~ सर्ट्ट। ग्यारी सकल
फ्लोरिडा, लक्जरील्याण्डमा केन्द्रीय फ्लोरिडा एरोस्पेस एकेडेमीका29 जना जेनिफर फिचेर एक अंग्रेजी शिक्षक थिए जब उनी 14 अप्रिल 2014 मा पक्राउ परेका थिए र 17 वर्षीया विद्यार्थीसँग सेक्स गर्थे।
प्रहरीको रिपोर्टअनुसार, पीडितको आमाले आफ्नो छोराको पाठ सन्देशहरूको अन्वेषण गर्न थालेपछि जागिर गरे र उनी घरमै थिएनन्। त्यो जब उनले उनको छोरा र उनको शिक्षक, जेनिफर फिचटरको बीच सन्देश देखे।
आमाले त्यसपछि फिचटरसँग भेट्नुभयो, जसले उसलाई भनिन् कि उनी आफ्नो छोराको साथमा प्रेम र उनीसँग कुनै पछ्याप थिएनन्। आमाले अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गरे।
सोसाइटी विद्यार्थी हुन धितो
नोभेम्बर 2013 मा अन्वेषकहरूले फिचिटर भन्छन् कि विद्यार्थीले कथित रूपमा आफ्नो कारको पछाडि 20 देखि 30 पटक विभिन्न ठाउँहरूमा यौन सम्बन्ध राखेका थिए, जसमा एक अपार्टमेन्ट परिसरमा पार्किंग स्थलमा समावेश छ। जब विद्यार्थीको आमाले उनको खोजी गरे, फिचटरले कथित रूपमा एक विद्यार्थी र किशोरको साथी बन्ने गर्थे।
Fichter पनि किशोरहरु द्वारा गर्भवती भए र गर्भपात को विकल्प चुने।
जेनिफर फिचिटरको गिरफ्तारी पछि $ 70,000 बन्धनमा जेलमा राखिएको थियो।
अप्रिल 25, 2014 अद्यावधिक गर्नुहोस्
अर्को विद्यार्थीले29 वर्षीया अंग्रेजी शिक्षक संग उनको कथित सम्बन्धको पुलिसलाई बताए पछि जेनिफर फिचिटरको विरुद्धमा नाबालिग गरी अवैध यौन गतिविधिको 20 वटा नयाँ गणनाहरू थिए।
दोस्रो विद्यार्थीले पोर्क शेरिफको पत्ता लगाउने बताउनुभयो कि सन् 1971 मा एयरोस्पेस एकेडेमीमा 17 वर्षको उमेरमा एक जूनियर थियो जब फिची उनको अंग्रेजी अध्यापक थिए।
डिटेक्ट्स भन्छन् कि फिचिटर र त्यसो-किशोरले सम्बन्ध सुरु गरेपछि उनीहरूले मे 2011 मा कक्षाको बाहिर बाहिरै बिताए। उनीहरूले टेक्स्टिङ सुरु गरे र अक्टोबर 2011 सम्म यौन सम्बन्धमा प्रगति गरे।
तिनीहरूले आफ्नो घर र उनको घरमा भेट्थे जब उनको आमा त्यहाँ थिएनन्। यो सम्बन्ध मई 2012 मा समाप्त भयो।
जेनिफर फिचिटरले अप्रिल 14 मा उनको गिरफ्तारी पछि $ 70,000 बन्धनमा जेलमा राखेका थिए। नयाँ शुल्कहरूमा आधारित, एक पोल्क काउन्टीको न्यायाधीशले $ 300,000 को नयाँ ब्यान्ड सेट गर्यो।
5 जुन 2014 अपडेट गर्नुहोस्
2012 मा आफ्नो अंग्रेजी शिक्षकको रूपमा जेनिफर फिटर भएको तेस्रो विद्यार्थीले अन्वेषकहरूलाई भर्ती गरेका छन् कि उनीहरु दुवैको यौन सम्बन्धमा संलग्न थिए।
प्रहरीले बताउँछ कि अगस्त 2012 मा जवान युवकले 17 बर्षको उमेरमा फिचेटरलाई विद्यालय नजिकैको हवाई अड्डामा अन्धामा निमन्त्रणा दिए। केहि बिंदु मा, फिचिटर र किशोर को हवाईअड्डा मा एफएए इमारत को छत मा गयो र सेक्स थियो। यौन सम्बन्ध चार महिनासम्म जारी रह्यो।
Fichter ले अल्पसंख्यक संग यौन सम्बन्धको लागि 10 अतिरिक्त शुल्क पायो। उनको बांडले अर्को $ 150,000 सम्म बढ्यो, यसलाई $ 520,000 मा ल्याइयो।
जून 17, 2014 अद्यावधिक गर्नुहोस्
जेनिफर फिचिटर को आधिकारिक तौर मा बच्चाहरु संग 37 गिनती लिंग संग आरोप लगाया गएको थियो जबकि उनले फ्लोरिडा फाउंडेशन मा सेंट्रल फ्लोरिडा एयरोस्पेस एकेडेमी मा पढे।
राज्य अभियुक्त कार्यालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट अनुसार, फिचिटरको पीडित मध्ये एक को साथ उनको साथमा गए जब 18 बर्ष भयो र उनको साथमा अर्को गर्भमा गर्भवती हुन पछि गर्भपातको लागि गए।
उनको अभियुक्तको अनुसार, उनले उनको चाँडो परीक्षणको दाबी गरे।
Ashley Casiday। मग शॉट
31 बर्षको उमेरमा आठौं कक्षाका शिक्षक एशले क्यासिडेलाई बच्चालाई अश्लील सामग्री पठाउने एक गणनाको साथ शुल्क लगाइएको छ।
सेन्ट क्लेयर काउन्टी जिल्ला जिल्ला अधिवेशन रिचर्ड माइन, एशले क्यासडे ले लीड्स, अलबामाको लेड्स मेड स्कूलमा पढाई गरिसकेपछि उनले 14 वर्षीया पुरुष विद्यार्थीलाई यौन स्पष्ट सन्देशहरू लेखे।
आरोप लगाइएको सेक्सिङको एक अनुसन्धान फेब्रुअरीमा सुरु भयो र क्याप्सेले आफ्नो शिक्षण स्थितिबाट इस्तीफा दिए।
कैदीदेबलाई 12 मार्च, 2014 मा उनीहरुले आफैंलाई अपहरण गरेपछि अल्पसंख्यक को लागी अश्लील सामग्री हस्तान्तरण गर्ने एक संख्यामा पक्राउ गरिएको आरोप लगाईएको आरोप लगाएको थियो। उनीहरु $ 100,000 बन्डन ​​पोस्ट गरेपछि जेलबाट रिहा गरियो।
सारा रेमो मग शॉट
31 वर्षे सारा एम रेमो एक आठ कक्षाको शिक्षकले बे सिटी, मिशिगनमा टीएल ह्यान्डी मेडिकल स्कूलको रूपमा काम गर्दै थिए जब उनी 14 जनवरी, 2014 मा पक्राउ गरेको थियो र दुई-अर्काको आपराधिक यौन आचरणको आरोप लगाए।
रेमोमो 2012 देखि 2013 सम्म एक विद्यार्थी संग सेक्स गर्ने आरोप लगाइएको छ जब उनी 13 बर्षको उमेरमै थिए।
त्यो वर्तमान $ 250,000 ब्यान्ड पोस्ट गरे पछि नि: शुल्क छ।
जनवरी29 मा सुरूवात शुरुवात सुनुवाईमा, पीडित, 15 बर्षको उमेरमा, उनले पहिलो पटक 2012 को जाडोको दौडान रेमोमा आफ्नो कक्षा कोठा भित्र यौन सम्बन्धमा संलग्न गरेका थिए। उहाँ 14 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्थ्यो।
पीडितले पनि रेम्मोसँग सेक्स गर्नुको कारण उनको शराब, सिगरेट र खानाको आपूर्ति गरे र उनले आफूलाई आफैं नग्न चित्रहरू लेखे।
पीडितका अनुसार, उनी र रेमोले स्कूलमा या एसेक्सभिलेमा रेम्मोको घरमा6देखि आठ पटक सेक्स गरेका थिए।
पीडितलाई रेमोमोको बारेमा साथीहरूलाई भने पछि स्कूलमा घोर लाग्ने बेला अफगानिस्तानको ध्यानमा कथित सम्बन्ध ल्याइयो।
स्कूल अधिकारीहरूले बच्चालाई तुरुन्तै सम्पर्क गरे र पीडितको छोराछोरीको वकालत केन्द्रमा साक्षात्कार गरिएको थियो र पछि, रेमोलाई गिरफ्तार गरियो।
सम्भावित जीवनको सजा
रेम्मो विरुद्ध ल्याएको आरोपमा पहिलो-अर्काको आपराधिक यौन आचरणको थप थप शुल्कहरू थपिएका छन्, यो कुल मिलाएर चार। अप्रिल29, 2014 को परीक्षण मिति निर्धारित गरिएको छ। यदि दोषी पाएमा, रेमोमा जीवनको सजाको सम्भावना सामना गरिरहेको छ।
शान्नोन राई स्प्रेड्राडलिन
शान्नोन राई स्प्रेड्राडलिन। मग शॉट
नयाँ ब्रुनेफल्सबाट 31, शानानोन राई स्प्रेड्राडिन, टेक्सासले 17 वर्षीया विद्यार्थीसँग अयोग्य सम्बन्धको आरोपमा उनको गिरफ्तारीको लागि वारंट जारी गरेपछि टेक्सासले आफूलाई अधिकारमा परिणत गर्यो।
11 मार्च, 2014 मा एक्यूक्विन हाई स्कूल अध्यापक एक शिक्षक र विद्यार्थी बीच अनुचित सम्बन्धको साथ दोस्रो सेकेण्ड फिलीनी प्रभारमा पक्राउ गरियो। यदि दोषी पाएमा उनी 20 वर्षको जेलको अधिकतम वाक्य र 10,000 डलरको ठीकसँग सामना गरिरहेका छन्।
Spradlin $ 50,000 ब्यान्ड पोस्ट गर्न पछि रिहा गरियो।
उनको गिरफ्तारी पछि उनको शिक्षण स्थिति देखि इस्तीफा ले लिया।
एरिका Ginnetti। मग शॉट
एक पेंसिल्वेनिया गणित शिक्षक एक छात्र संग यौन सम्बन्ध मा आरोप लगाएको छ।
15 जनवरी, 2014 मा लोअर मोर्ल्याण्डल्याण्ड टाउनशिप पुलिस एक टिप प्राप्त भएको छ जुन लोअर मोरल्याण्ड हाई स्कूल मा एक शिक्षक स्कूल मा एक छात्र संग अनुचित सम्बन्ध मा शामिल थियो।
मन्टगोमेरी काउन्टी जिल्लाका एवरेष्ट अफिसका अनुसार, एरिक एना गिनिटी, 33 बर्षकी उमेरमा उनी एक 17 वर्षीया विद्यार्थीसँग यौन सम्बन्ध भएको बेला स्कूलमा गणित शिक्षक थिए। यसमा उनले विद्यार्थी फोटोग्राफहरू र भिडियोहरू पठाउँछन् जुन प्रकृतिमा यौन हो र उनको साथमा यौन सम्बन्ध राखिएको थियो।
रिपोर्टले यो पनि थाहा पाएको छ कि अन्वेषकहरूले विश्वास गर्थे कि Ginnetti र पुरुष विद्यार्थी बीच सम्बन्ध 2013 को मई मा सुरु भयो जब Ginnetti ले स्कूलको वरिष्ठ पदोन्नतिमा उनको सम्पर्क गरे र उनलाई सोध्नुभयो कि उनी आफ्नो व्यायामशालामा काम गर्थे भने।
केही दिनपछि, गिनीटीले विद्यार्थीलाई आफ्नो सेल फोन नम्बर दिए र दैनिक रूपमा कुराकानी गर्न थाले।
अर्को धेरै महिनामा, गिनिटीले कथित रूपमा विद्यार्थीलाई पाठ सन्देशहरूको श्रृंखला पठाउनुभयो जुन प्रकृतिमा यौन थियो। ग्रंथहरूले गिनितीका भिडियोहरू आफूलाई यौन क्रियाकलापको उत्तेजित गर्दै र उनीहरूको अंडरवियरमा र बिकनीमा यौन सम्बन्धी चित्रण गरेका तस्वीरहरू समावेश गरेको थियो।
अन्वेषकहरूले भने कि उनीहरूले उत्तरपूर्वी फिलाडेल्फियामा एक कफी पसलमा भेट्टाए र त्यसपछि नजिकैको औद्योगिक पार्कमा गएर उनीहरूले आफ्नो कारमा यौन संभोग गरेका थिए। त्यसपछि उनले उसलाई कफी शटमा फिर्ता दिए र उनलाई कसैलाई भन्न नचाहेर सोधे।
Ginnetti, जो विवाहित छ र आमा तीन छोराछोरी, उमेर 8, 11, र 14, को आलोचना गरिएको थियो 13 वटा गणनाहरू, एक छात्रको यौन हमला सहित, अल्पसंख्यक को लागि अश्लील सामग्री, र नाबालिगहरूको भ्रष्टाचार सहित।
उनको जमाना $ 50,000 थियो, जुन उनको रिलीज भन्दा पहिले पोस्ट गरियो। उनको जमानतको थप सर्तहरू यसमा उनीहरूको जीपीएस निगरानी यन्त्र पहिरन समावेश गर्दछ, तिनको पासपोर्ट त्याग्ने र उनीहरूलाई पीडितको साथ कुनै सम्पर्क छैन र छोराछोरीको बाहेक अरूको साथ अपरपेक्षित सम्पर्क छैन।
एक प्रारम्भिक सुनु 14 फरवरी, 2014 को लागि तय गरिएको छ
ब्रिटनका पूर्व शिक्षक, न्यु योर्कले भ्रष्टाचार (द्वितीय-डिग्री आपराधिक सेक्स अधिनियम) मा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ र एक बालबालिकाको कल्याण सहन थालेको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूको अनुसार, 31 वर्षीया राहेल सैंटोरा6जनवरी 2014 मा पक्राउ गरिएको थियो। 2013 को गर्मीमा 15 वर्षीया विद्यार्थीले यौन सम्बन्ध राखेका थिए। घटनामा कथित रूपमा घटना भएको घटनामा सान्तारो रश-हेनरीटटामा शिक्षकको रूपमा कार्यरत थिए। स्कूल जिल्ला। उनको गिरफ्तारीको समयमा न्यूयर्क फेर्टलपोर्ट मा मोनरो # 1 बीओसीएस द्वारा कार्यरत थिए।
अन्वेषकहरूले भने कि गर्मीको समयमा पीडितले ट्यूटोरिङको लागि सान्टाराको घर जान्थ्यो, जहाँ उनीहरूले यौन सम्बन्धमा संलग्न छन् भन्ने विश्वास गर्छन्।
संतोषले आरोपमा दोषी ठहराए। न्यायाधीशले शिकारको सुरक्षाको आदेश जारी गरे र $ 20,000 मा जमानत गरे।
किमबली ब्रोडी। मग शॉट
एक क्ले काउन्टी, फ्लोरिडा प्राथमिक शिक्षक आरोप लगाइएको थियो किशोरीको केटाको साथ।
जैक्सनविल शेरिफ कार्यालयको अनुसार, दोस्रो-अर्की शिक्षक शिक्षक कमबली ब्रुडी, अहिले कारवाहीमा एक किशोर केटाले नग्न पाएको र कार भित्र आधा ब्रोडी पत्ता लगाउँदा पछि चेररी एलिलिनरी स्कूलबाट भुक्तानी प्रशासकीय छुट्टीमा छ।
प्रहरी रिपोर्टले बताएको छ कि6जनवरी, 2014 मा ब्रुडीले संदिग्ध 24 वा वृद्धका साथ गैरकानूनी यौन गतिविधिको आरोप लगाएको थियो र 16- वा 17 वर्षको उमेरको पीडितको आरोप लगाएको थियो।
जेनिफर मेरर्किंगर। स्कूल चित्र
एक हैम्बर्ग, पेंसिल्वेनिया हाईस्कूल शिक्षकले 18 वर्षीया विद्यार्थीसँग उनको कथित यौन सम्बन्धको अनुसन्धान गरेपछि आफूलाई प्रहरीमा भर्ना गर्यो।
प्रहरीको अनुसार, जेनिफर मेरर्किङर, 40 वर्ष, डिसेम्बर 2013 देखि विद्यार्थी विद्यालयसँग यौन सम्बन्धको आरोप लगाइएको थियो।
स्कूलले मेरिलिङरमा उनीहरूको अनुसन्धान सुरु गरेपछि विद्यालयका अधिकारीहरूले उनीहरूको अवैध व्यवहार सम्बन्धी जानकारी पाएका थिए।
10 जनवरी, 2014 मा, Merklinger संस्थागत यौन आक्रमण को तीन felonies संग चार्ज गरिएको थियो। उनको जमानत $ 25,000 मा सेट गरियो।
Janelle Foley। फेसबुक
मासाचुसेट्स मध्य विद्यालयमा एक लखनऊ महिलाको रूपमा रोजिएको चार जना आमालाई 15 वर्षीय बालकको वैधानिक बलात्कारको आरोप लगाइएको थियो।
8 जनवरी, 2014 मा, वेलमाउथ, फ्लोरिडाबाट 36 जना जीनल फलोले, नोभेम्बर 24, 2013 मा नयाँ वर्षको दिन आफ्नो मित्रको साथीलाई बेपत्ता पार्न दोषी ठहराउन आग्रह गरे।
अभियोजक ड्यानेल Piccarni अनुसार, फोली र पीडित आमाले एकअर्कालाई उच्च विद्यालयको पछि जान्थे र उनीहरुका बच्चाहरु सँगै बढे। Piccarni ले पनि भन्यो कि फलोले दुवै अवसरों मा केटा संग सेक्स शुरू गर्यो। यस घटनामा प्रमाणहरू लडाईको सेलफोन र कन्डममा लुटेको चित्रहरू फेला पर्छन्। अन्वेषकहरू पनि निर्धारित गर्न प्रयास गरिरहेका छन् कि फले अर्को अल्पसंख्यकसँग यौन सम्बन्ध थियो।
शर्तहरु संग जारी
उनको रिलीज को शर्तहरु को तहत, फोले ड्रग र अल्कोहल को लागि जांच हुनु पर्छ, एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस पहनना चाहिए, एक मानसिक मूल्यांकन छ र पीडित या उनको आमाबाबु या 18 वर्ष को आयु संग कुनै बच्चा को संपर्क नहीं हो, नहीं आफ्नै बच्चाहरु सहित।
त्यो मामला को परिणाम विचाराधीन उनको नौकरी देखि भुगतान प्रशासनिक छुट्टी मा राखयो।
प्रसिद्ध खेल स्टारहरूको मग शॉट्सको एक ग्यालरी
जीवनी: एलेन जॉनसन-सरलेफ, लाइबेरियाको 'आयरन लेडी'
फ्रांसीसी अभिव्यक्ति कसरी 'ट्यान पीन' प्रयोग गर्ने
संगीत फारामहरू र बारकोक अवधिको शैलीहरू
Fickle फ्रांसीसी विशेषण
Oberon र टाइटनिया क्यारेक्टर प्रोफाइल
समीक्षा: मिशेलिन एक्स-आइस एक्सआई 3
सबै भन्दा कम रासायनिक? रेपिन्फेरियोक्सिन क्याप्ससिन भन्दा हजारौं टाइम्स हट्टर हो
सिस्टम ट्रेमा डेल्फी अनुप्रयोगहरू राख्दै
अनिवार्य मृत्यु धातु एल्बमहरू
तपाइँको कलेज मेजर कसरी छनौट गर्ने?
कालो पाउडर संरचना
डायनासोर र कनेक्टिकटको प्रागैतिहासिक पशु
सिक्नुहोस् जापानीलाई कसरी 'म तिमीलाई माया गर्छु'
आयोडा टर्बेल: माकिंगर पत्रकारिता, कर्पोरेट पावर को आलोचना
हनी किन प्रयोग गर्दछ (केहि) जलकुमार पेंट?
कसरी सामाजिक मीडियाले राजनीति परिवर्तन गरेको छ
ऐनी ब्राडस्ट्रिटको कविताबारे
जादुई हर्ब पत्राचारहरू
टोगा, टक्स, र थप: तपाईंको अर्को कलेज पार्टीको लागि उत्कृष्ट विषयवस्तु